MOTOROLA News: Launch, Ekwentị, Mbadamba na More - Androidsis | Gam akporo (Peeji nke 3)
Nke a bụ ọnụ ala Moto 360 nke Motorola kagburu
Motorola gosipụtara ọhụụ ọhụụ ọhụụ ama ama ya na IFA. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ America nwere Moto 360 dị ọnụ ala nke ọ kagburu.
O kwere omume ugbu a ịzụta Moto X Play na ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri, ọbụlagodi nke ọcha!
Ọ ga-ekwe omume ịzụta Moto X Play na ọnụahịa kachasị mma, ma ọ dịkarịa ala agba ọcha maka ihe na-erughị euro 350 mgbe agba ojii, enweghị nghọta nwere ọnụ ahịa gbasara euro 42 karịa.
Motorola chefuru gyroscope na Moto X Play
Motorola echefuola gyroscope na Moto X Play na ihe ijuanya nke ọtụtụ ndị ọrụ maka ịbụ ngwaọrụ na-efu € 400.
Tụnyere Moto X Play Vs Samsung Galaxy S6
A tụnyere ebe anyị na-etinye Moto X Play na Samsung Galaxy S6 ihu na ihu, olee onye n'ime ha ga-aka mma?
Nkọwa n'etiti Moto G 2014 na Moto G 2015
A ntụnyere ebe anyị na-etinye Moto G 2015 na Moto G 2014 ihu na ihu, nke enwere onye mmeri doro anya na nke ahụ nwere ike ịbụ otu n'ime nzọ kachasị mma.
DxOMark na-akwado Moto X Style dị ka ama nke atọ nwere igwefoto kachasị mma
Na ntụle DxOMark, a na-etinye Moto X Style dị ka ekwentị nke atọ kachasị mma na igwefoto. Ezi a feat.
Moto X Play, zuru oke gam akporo ama
Moto X Play nwere ike ịbụ ezigbo ama ugbu a na nnukwu ngwaike, nnukwu imewe na nke ahụ na-abịa na ọnụ ala karịa Style na € 399 ya.
Motorola na-egosi 2015 Moto G: 5 ″ ihuenyo, Snapdragon 410 na 13MP igwefoto
A ọhụrụ Moto G 2015 si Motorola nke nwere 5-anụ ọhịa ihuenyo, 13 MP igwefoto na Snapdragon 410 mgbawa maka € 199.
Moto X Style, gosipụtara ọhụụ ọhụrụ Motorola
Motorola egosila Moto X Style, ọkọlọtọ ọhụrụ nke ndị nrụpụta nke na-achọ imebi ahịa n'ihi uru ọ bara maka ego
Otu esi agbaso ihe omume Motorola. Taa bụ nnukwu ụbọchị !!
Taa, anyị na-akpọ gị òkù ka ị hụ ihe omume ngosi Motorola ka ọ dị ndụ.
Fnac ebipụta nkọwa na ọnụahịa na preorder nke Motorola Moto G 2015
Ihe ohuru Motorola Moto G 2015 gosipụtara ego na nkọwapụta na weebụsaịtị Fnac. Ama gọọmentị ahụ ekwenyeghị ma ọ bụ gọnarị.
New oyiyi nke Moto G 2015 leaked
Motorola na leaks adịghị adị nke ọma, na, ọzọ, anyị nwere ike ịhụ ihe oyiyi ọhụrụ nke ọdịnihu Moto G 2015.
Enwere ike igosi Moto G 2015 na July 28
Ọgbọ ọzọ nke ọnụ ọgụgụ ndị America, Moto G 2015, nwere ike izipu na July 28.
Motorola Moto G 2015 hụrụ na nsụgharị ọhụrụ
Ọgbọ na-esote Moto G dị n'akụkụ nkuku. Moto G 2015 apụtawo dị ka nsụgharị.
Nzacha ndị ọrụ na-ese onyinyo nke ọhụrụ Moto G 2015
Ihe oyiyi nke Motorola Moto G 2015 ọhụrụ gosipụtara, nke na-abata na ebumnuche nke ịga n'ihu na-achị n'etiti etiti.
Moto G 2015 ọ ga-adị ka nke a?
Onyonyo nke ọgbọ nke atọ nke ekwentị Motorola, Moto G 2015, agbaala ma gbasaa na Internetntanetị.
Ọgbọ nke atọ Moto G 2015 na-egosi ihe ịrịba ama nke ndụ
Moto G 2015 na-esote dị nso na nkuku n'ihi ọdịdị na-adịbeghị anya na ụlọ ahịa a ma ama n'ịntanetị.
2015 Moto X ga-edekọ na 240 fps
Ọgbọ ọzọ nke Motorola smartphones, Moto X 2015 ga-enwe ike nwayọ ngagharị, ọkachasị na 240 fps.
Motorola na-amalite site na ntinye nke Android 5.1 maka Moto X ọgbọ nke abụọ
Motorola ka kwupụtara nkenye nke gam akporo 5.1 na ọgbọ nke abụọ Moto X nwere ụfọdụ akụkọ na abụghị mmegharị
Enwere ike ịkọwapụta nkọwa nke Moto X 2015: 5,2 ″ QHD ihuenyo, Snapdragon 808 na 4GB RAM
Motorola na-ezube imepụta 2015 Moto X na ihuenyo QuadHD, 4GB nke RAM na Snapdragon 808 na Ọgọstụ ma ọ bụ Septemba.
Companylọ ọrụ America Motorola ekwupụtala na ha enweghị mmasị, n'oge a, imepụta mbadamba.
Na-esote Moto X 2015 nwere ike ịpụta na August
Onye isi nke Motorola, ekwuputala na a ga-emelite ọtụtụ ngwaọrụ Motorola kwa afọ, yabụ Moto X 2015 na-apụta n'August
Next m na-akọwa otú wụnye Motorola gallery ngwa ọ bụla gam akporo ọnụ na-enweghị mkpa mgbọrọgwụ.
Moto E 2015 nweta ekele maka Androidsis na Motorola Spain
Chọrọ inweta Motorola Moto E 4G ọhụrụ? Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, sonye na Moto E 2015 Onyinye Efu na Androidsis na Motorola Spain na-enye gị mbupu ụgwọ efu zuru oke gụnyere.
O doro anya na ọ bụrụ na ịnweghị Smartphone site n'aka onye nrụpụta Motorola, dị ka m ruo ugbu a, ị gaghị ama ọrụ a nke Moto 360.
New Motorola Moto E 4G ngosi ihe omume, Unpacked Moto E 4G ebe ọ bụla ị họọrọ!
Site na Androidsis anyị na-akpọ gị òkù maka mmemme a pụrụ iche, Unpacked Moto E 4G ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Anyị amatalarị nkọwa gọọmentị nke Motorola Moto E 4G ọhụrụ.
Ugbu a ozi niile banyere ọhụrụ Moto E 2015 e leaked, si ihe oyiyi na-egosi na imewe anyị hụrụ n'oge na teknuzu e ji mara nke Moto E 2015, ọgbọ ọhụrụ nke emeputa E nso nso nso nwetara site Lenovo.
N'okpuru ebe m na-akọwa a aghụghọ iji nweta zoro ezo menu nke Motorola ọnụ dị ka Moto E, Moto G ma ọ bụ Moto X.
Ebee ka nnukwu ihe ịga nke ọma Motorola dị?
Anyị na-enyocha ihe bụ isi dị mkpa maka ihe ịga nke ọma nke Motorola nke mere ka ụlọ ọrụ North America dị ka otu n'ime isi ntụnye iji soro na ụwa nke ọnụ na sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Ihe niile nke ọhụụ gam akporo Wear 5.0.1 na-enye anyị na Moto 360
Taa, m na-egosi gị ihe niile gam akporo Wear 5.0.1 na-enye anyị na Moto 360, mmelite ohuru nke rutere taa site na OTA.
Ihe ọhụrụ Moto X 2014 anatala gam akporo 5.0 Lollipop
Motorola ewepụtala OTA iji melite Moto X 2014 ka Android 5.0 Lollipop, nke ga-eji nwayọ rute ụdị Europe
Motorola na-ebipụta ọkwa anọ nke Moto 360 nke na-akwado ọmarịcha atụmatụ ya
Motorola weputara ọkwa ọhụụ anọ maka Moto 360, na-akwado oke dị elu nke smartwatch ya ama ama.
Moto G 2013 anatala gam akporo 5.0 Lollipop
Ee, Motorola emeela ya ọzọ. Moto G nke afọ 2013 anatalarị ozi ngosi a na-atụ anya iji nweta mmelite gam akporo 5.0
Moto G 2014 ga-emelitekwa na Android Lollipop tupu njedebe nke afọ a
Site na ozi ọma dịka nke a, ọ naghị eju m anya na Motorola enwetawo ntụkwasị obi nke ndị ahịa ya, Moto G 2014 ga-enwetakwa ogo nke Lollipop tupu njedebe nke afọ a bụ 2014.
Motorola France kwadoro na Moto Maxx agaghị abịa Europe
Ọ bụ ezie na ha ehichapụla ozi ahụ, na profaịlụ Twitter nke Motorola France ha kwupụtara na Moto Maxx agaghị erute Europe na njedebe.
Olee otú imelite Moto X 2014 ọhụrụ leaked version nke gam akporo Lollipop
Nke a bụ otu esi emelite Moto X 2014 ka Android 5.0 Lollipop site na iji akpa mbụ leak firmware nke leaked naanị awa ole na ole gara aga.
Akpa vidiyo kacha mma gam akporo na Moto X 2014
Anyị enweworị vidiyo mbụ ebe anyị nwere ike ịhụ ihe gam akporo Lollipop dị ka Moto X 2014, ọnụ nke nwere ike ịbụ onye mbụ ịnata gam akporo 5.0 site na OTA.
Motorola nwere ike inwe Moto G 2014 4G ọhụrụ n’aka ya
Motorola esitela na ụlọ ọrụ pụrụ iche enwetakwala nnwale ndị na-ewu ewu na ekwentị ọhụrụ ya. Ma ndị ọhụrụ Moto G 2014 na nke ọhụrụ Moto X 2014 enwewo ezigbo ihe ịga nke ọma ma ọ dị ka onye nrụpụta ụlọ ọrụ Illinois nwere ike na-arụ ọrụ na Moto G 4G ọhụrụ.
Moto X 2014 nwere ike ịbụ ọnụahịa mbụ iji nweta gam akporo 5.0 Lollipop
Yabụ ọ bụrụ na emechara ihe ọ bụrụ na ọ bụrụ na akwadoro ya n’ihu ọha, Moto X 2014 ga - abụ onye mbụ ga - enweta Android 5.0 Lollipop.
Motorola na-enye Moto Maxx, nke dị ugbu a na Brazil
Motorola egosiputa Moto Maxx na Brazil, ngwaọrụ dị mma mana nke, maka ugbu a, agaghị abata Europe
Edepụtara ndepụta nke ngwaọrụ Motorola iji melite gam akporo 5.0 Lollipop
Edepụtara ndepụta nke ngwaọrụ Motorola iji melite gam akporo 5.0 Lollipop.
Motorola Droid Turbo na-enye awa 48 nnwere onwe na atụmatụ ndị na-atọ ụtọ
Motorola ka webatara Motorola Droid Turbo, ama ama nwere njiri mara dị egwu sitere na ndị ọrụ Verizon
Iwu olu niile nke Moto 360. Ọrụ anaghị ekwe omume!
Lee ị nwere vidiyo a n'enweghị mmetụ ọ bụla ka ị wee hụ iwu olu niile nke Moto 360. commandsfọdụ iwu bara uru ma ha ka nwere ọtụtụ iji melite.
Ndepụta nke mmelite gọọmentị na Android Lollipop si Motorola
N'ebe a, anyị hapụrụ gị ndepụta gọọmentị mbụ nke ụgbọ ala Motorola nke ga-enweta Android Lollipop.
Nnwale ọsọ ọsọ: LG G2 na Moto X 2014
Anyị enweela ule Androidsis ọhụrụ, oge a anyị na-eche LG G2 na Moto X 2014 ihu, ị chere na a ga-enwe nnukwu ọdịiche dị n'etiti ọnụ abụọ ahụ?
Anyị na-enyocha maka gị Motorola Moto X 2014 iji kọọrọ gị akụkụ ọma na nke adịghị mma.
Motorola na-emelite ngwa Motorola Radio FM nke Moto G na Moto E
Ọ bụrụ na ị nwere Moto G ma ọ bụ Moto E ị nwere ike imelite Motorola Radio FM, ngwa ndị nrụpụta iji gee redio ahụ
Nnwale ọsọ ọsọ: LG G3 na Moto G 2014
Anyị bụ ndị a na ọzọ na-Androidsis ọsọ ule taa na-eche ihu LG G3 na Moto G 2014, na-enweghị obi abụọ abụọ senseshional ọnụ iche site a nnukwu price nso.
Nnwale ọsọ ọsọ: LG G2 na Moto G 2014
N'ebe a, m hapụrụ gị ọsọ ọsọ a nke anyị chere LG G2 na Moto G 2014 ihu iji hụ ezigbo ahụmịhe onye ọrụ nke ọdụm abụọ ahụ na-enye anyị n'ihe gbasara ogbugbu ngwa dị iche iche.
Lee ị nwere nyocha vidiyo nke Moto G 2014, ọnụ na-abịa ka akpọ ya ka ọ nọrọ na aha nke ama kachasị mma nke afọ ahụ ruo nso nke gam akporo n'etiti etiti.
Otu esi enweta mgbọrọgwụ Moto G (2013)
Lee ị nwere nkuzi zuru oke nke ị ga-enwe ike iwepụ Moto G n'ụzọ dị mfe.
Moto ọhụrụ X
Nyocha nke New Moto X, njedebe ọhụrụ nke ndị nrụpụta nke ọ na-ezube iguzo na Samsung S5.
Ihe ekwere na nkwa bu ugwo ka anyi wetara gi nyocha nke ohuru Moto X
Anyị nwalere Moto G ọhụrụ, nke kachasị mma na ahịa?
Anyị enweela ike ịnwale Moto G ọhụrụ na mmetụta enweghị ike ịka mma.
Moto Voice na-enye ike ịchịkwa ekwentị Motorola gị na iwu olu
Moto Voice bụ emelitere na ama ngwa maka ọhụrụ ulo oru ọhụrụ Motorola ngwaọrụ
Download na akwụkwọ ahụ aja nke ọhụrụ Moto X 2014
Download na akwụkwọ ahụ aja nke ọhụrụ Motorola Moto X 2014 na ha vivid agba
Ihe nlere nke foto ndi Motorola Moto X (2014)
Examplefọdụ foto were na Moto X 2014 na-egosi ogo nke igwefoto nke ekwentị Motorola ọhụrụ a
Android 4.4.4 malitere ibata na Moto G
Nkeji edemede ebe anyị maara ozi ọma na Android 4.4.4 malitere iru Motorola's Moto G
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Motorola Moto 360 smartwatch
Motorola's Moto 360 smartwatch ga-abata n'oge ọkọchị a. Anyị na-enye gị ozi niile anyị nwere banyere nke a wearable
Ọ bụ "egbugbu dijitalụ" bụ ụzọ kachasị mma iji kpọghee Moto X?
Tattoodị dijitalụ bụ akara Motorola maka nchekwa na ịkpọghe ekwentị gị Moto X
Motorola kwadoro na anyị ga-ahụ gam akporo L na Moto X na Moto G
Android L na Moto X na Moto G ga-anọ mgbe Google mechara wepụta nsụgharị ikpeazụ maka ọdịda a na-abịa
Motorola weputara vidiyo na-egosi Moto 360 nso
Motorola's Moto 360 bụ ụzọ nke atọ maka smarwatch n'okpuru gam akporo Wear, ụdị agbanwere nke gam akporo maka wearables
Onyinyo nke Moto X + 1 na-leaked na ya kwere omume nkọwa na igba egbe ụbọchị
Leaked ihe oyiyi nke Moto X + 1 Bilie kwere omume nkọwa na igba egbe ụbọchị na njedebe nke August
Nnwale ntachi obi, Moto G na Moto E, onye ga-emeri duel fratricidal?
Taa, anyị na-eche duel nke fratricidal na Moto G na Moto E n'ihe banyere iguzogide ọdịda mberede.
Motorola Moto G ọ ga - abụ mmiri mmiri? Ọ ga - emikpu na H2O maka nkeji 30? Hụ onwe gị na vidiyo a.
Moto E koodu wepụtara maka ndị mmepe
Motorola ewepụtala koodu maka Moto E, nke ga - enyere ndị mmepe ohere ịmepụta omenala ROM
Emechiri ụlọ ọrụ Motorola na Fort Worth, ebe ọzọ aga China?
Factorylọ ọrụ Motorola dị na United States ga-emechi na njedebe nke afọ. Ebe ọzọ adighi ama, mana China kwesiri ibu obodo ahoputara.
Motorola na-akwadebe Moto X1, onye nọchiri Moto X
Ihe onyonyo nke Moto X1, Motorola ohuru ohuru nwere pan 5.2-inch, ka agbapuru
Etu ị ga-esi kpọghee Moto E bootloader, gbanye ma wụnye mgbake omenala
Etu ị ga-esi kpọghee Moto E bootloader, mgbọrọgwụ ma wụnye mgbake omenala
Samsung Galaxy S5 VS Moto E: Obere obere Motorola kari Samsung kacha elu na ọsọ ọsọ
Lee ị nwere vidiyo nke ha na-eche Samsung Galaxy S5 VS Moto E ihu, nke obere Motorola na-enwe mmeri na ọsọ nke ogbugbu
Dịrị Moto E ga-adị mfe ekele Motorola
Motorola kwadoro na ọ ga-agụnye Moto E na Bootloader Unlock program ya mere ịgbanye Moto E ga-adị mfe
Gwa ndị kọntaktị gị nke ihe mberede na ngwa Motorola Alert dị na Moto E na Moto G LTE
Ngwa Motorola Alert dị ugbu a maka Moto E na Moto G 4G LTE
Motorola ewebata Moto G 4G LTE
Motorola na-enye Moto G 4G LTE, smartphone nke mezue ihe Moto G nyere, yana mgbakwunye inwe oghere microSD
Ọgbọ na-esote nke Moto X na Moto G ga-anọgide na-enwe ụdị dị ọcha nke gam akporo
Lenovo hapụrụ Motorola n'efu, nke ga-eme ka ọgbọ ọzọ nke Moto X na Moto G nwee gam akporo dị ọcha
Moto E, isi abuo maka euro 50
Motorola na-akwadebe ama ọhụụ, Moto E, maka ahịa na-apụta ma dị ọnụ ahịa na euro 50.
Etu ị ga-esi kpọghee Motorola Moto G Bootloader
N'okpuru ebe m na-egosi gị usoro ihe niile ịchọrọ iji kpọghee Motorola Moto G Bootloader site na nzọụkwụ.
Motorola Moto G dị na Media Markt maka Euro 179
Anyị nwere Motorola Moto G dị na Media Markt maka ọrịre ọhaneze ka ọ bụrụ euro 179.
Motorola G na ire ere na Spain site na Amazon
Anyị nwere ike idozi Motorola G anyị na peeji gọọmentị nke Amazon Spain na ọnụahịa nke 175 Euro.
Google setịpụrụ ihe nlere iji soro Motorola na mmelite ya na gam akporo 4.4 Kit Kat
Google na-etinye batrị na Aims setịpụrụ ihe atụ site Motorola na oke update maka gam akporo ọnụ.
SuperOneClick emelitere iji kwado Motorola ọnụ
Nbudata nke SuperOneClick kachasị ọhụrụ nke na-agụnye nkwado maka ụdị ndị ọhụụ ọhụrụ, gụnyere Motorola na LG.
Ichetara etu ekwentị izizila Motorola dị?
Martin Cooper gaara akpọ ekwentị mbụ na Motorola DynaTAC (ekwentị izizi mbụ) na onye na-asọ mpi ya, Joel Engel.
Motorola Na - ewebata Atlekịtị Atrix HD Onye Mmepụta
Motorola gosipụtara ọhụụ ọhụrụ nke ekwentị ya, Motorola atrix HD Developer Edition nke na-enye ohere itinye omenala ROM ngwa ngwa.
Motorola na-akwadebe smartphone na-enweghị oke
Asịrị na-arụtụ aka na ekwentị Motorola ọhụụ nwere mmetụ ihu na-enweghị oke
Samsung SGH-i927: 2 Galaxy nwere anụ ahụ QWERTY
Samsung SGH-i927: 2 Galaxy nwere anụ ahụ QWERTY.
Motorola Atrix ka emelitere na gam akporo 2.3.4 Gingerbread
Motorola Droid X2 Nkọwapụta Leaked
Motorola Droid X2 nkọwa
Ubuntu na-agba ọsọ na Motorola Atrix
Ubuntu n'ọdụ ụgbọ mmiri maka Motorola Atrix
Motorola Atrix 4G, isi abuo, 1Gb nke Ram na 4-inch QHD ihuenyo. Onweghi ihe ozo ikwu
Motorola Atrix 4G abụghị naanị ama ọ bụla, ọ bụ nnukwu ama ama na-etinye abụọ-isi, 4-inch QHD ihuenyo na 1Gb nke RAM
Mmiri na bumps abụghị ihe ọ bụla na Motorola Defy, lelee ya
Motorola Defy, nke na-apụ n'okporo ụzọ, nwere ihe ịga nke ọma gafere ule ntachi obi, n'okpuru mmiri na ụjọ.
Anyị na-ahụ animated nzụlite nke Motorola Droid R2-D2
Gbalịa mee ka ihe esere ese dị na Motorola Droid 2 R2-D2
Motorola naputara Droid X Isi Usoro
Motorola ewepụtala koodu isi mmalite ya nke Droid X ma dị na weebụsaịtị ndị America maka ndị mmepe.
Motorola Droid X bụ onye ọrụ ugbu a, ekpughere atụmatụ ya niile
Motorola taa gosipụtara Motorola Droid X ọnụ ya nwere ezigbo atụmatụ.
Nandroid Ndabere nkuzi maka Motorola Milestone
Ọfọn, ịhụ na ịme nkwado ndabere oge ụfọdụ na-aghọ odyssey, kedu ụzọ kachasị mma iji biputere nkuzi iji mee ka ọ dị mfe?
[Mod] Melite gam akporo 2.0.1 ka 2.1 na Motorola Milestone
Etu esi melite rom si gam akporo 2.0.1 rue gam akporo 2.1 na Motorola Milestone
Motorola Quench ma ọ bụ Motorola Cliq XT, Android 2.1 na Motoblur
Motorola anaghị akwụsị ikwupụta ọnụ ya na sistemụ gam akporo ma ugbu a ọ bụ ntụgharị nke Motorola Cliq XT ...
Etu ị ga-esi nweta mgbọrọgwụ na Motorola Milestone
Akwụkwọ ntuziaka iji nweta ohere mgbọrọgwụ na Motorola Milestone, dị mfe ma doo anya.
Motorola Milestone nwere egwuregwu 3D
The Motorola Milestone bụ ọnụ nwere ezigbo njirimara mara mma ma gosipụta nke a na mmezu nke egwuregwu 3D ndị a
Otu esi enweta ohere mgbọrọgwụ na Motorola Cliq
Motorola Cliq, nke dị na Spain na mpụga United States anyị maara dị ka Motorola Dext agbanyela mgbọrọgwụ
Motorola Milestone, ụzọ mkpirisi keyboard
Site na keyboard Motorola Milestone anyị nwere ike ịnweta usoro mkpirisi dị ka etu anyị si eme PC keyboard. M hapụrụ gị ole na ole
SHOP4APPS, Motorola's Ahịa gam akporo
Motorola na akwadozi Android Market nke a, aga akpo ya Shop4app, nke a na enweta site na ekwentị mkpanaaka na PC.
Etu ị ga-esi nweta mgbọrọgwụ ACCESS NA MOTOROLA DROID
Kemgbe ụnyaahụ ọ ga-ekwe omume ịnweta ohere mgbọrọgwụ na Motorola Droid na ọ dị mfe.
MOTOROLA DROID NA ANDROID 2.0 NSOGBU
Enwere ọtụtụ ndị ọrụ na-enwe nsogbu na Motorola Droid ọnụ ha yana dịka ha na-ekwu na ọ bụ n'ihi gam akporo 2.0